5 Best Voajanahary Loharano Mafana Any Eoropa | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby any Italia > 5 Best Voajanahary Loharano Mafana Any Eoropa
ranomasina, renirano, ary farihy tsy ireo ihany no tsara tarehy voajanahary zava-mahagaga izay mendrika mikasa fialan-tsasatra manodidina. Isika dia fanomezana anarana ny 5 Best Voajanahary Loharano Mafana Any Eoropa fa dia mihoatra noho ny mendrika ny fitsidihana miaraka amin'ny fanampian'ny Hamonjy Ny Fiaran-dalamby tapakila.
5 Best Hot Springs In Eoropa 1: Aix Les Bains Riviera Ny Alpes, Frantsa
Aix Les Bains, The Riviera of the Alpes dia tanàna mafana, berthed ny mampino vahiny no malalaka Lake Bourget. Izany no iray amin'ireo 5 Best Voajanahary Loharano Mafana Any Eoropa ary dia hita lalina tany amin'ny faritr'i frantsa Savoie, malaza noho ny Alpes Massif manodidina. Ny fisian'ny rano madio, be mineraly fahamarinana, manodidina ny tanàna, hitarika azy ho azy io fomban-drazana mafana. Io herin'ny maizina toerana tena manome anao ny tsara indrindra ny toetry ny tsara ho. Ao Aix les Bains Riviera des Alpes, ny fanafody voajanahary sy solifara manan-karena rano manambatra ny manolotra ny marina ny fahaterahana indray.
Geneva mba Aix Les Bains Le Revard Fiaran-dalamby
Lausanne mba Aix Les Bains Le Revard Fiaran-dalamby
Paris Aix Les Bains Le Revard Fiaran-dalamby
Bern mba Aix Les Bains Le Revard Fiaran-dalamby
2: Terme von Saturnia - Tuscany, Italia
Mora ny mahazo tsy avy na aiza na aiza ao Eoropa, miaraka amin'ny fanampian'ny Hamonjy Ny Fiaran-dalamby, Tuscany mirehareha iray amin'ireo tena idyllic loharano mafana eto amin'izao tontolo izao. Noho izany, misy dia tsy mahagaga raha tsy izany dia ao amin'ny lisitry ny 5 Best Hot Springs In Eoropa! miaraka 500 litatra ny fitsaboana rehefa pumped rano avy amin'ny volkano faharoa isaky ny vava volkano, lohataona ity rano madio tanteraka. Noho ny 99.5 ambaratonga F rano sy ny tsara tarehy italiana tontolo manodidina azy, tsy misy isalasalana ho solafaka any an-lalina ny toetry ny fialam-boly lohataona ity.
Zavatra tsy mafana Spa milaza ho tsy mitovy na aiza na aiza eto an-tany. Fireharehana rano izay mazava ho vaika, madio sy manan-karena amin'ny sira mineraly. Ny fanomezana ny natiora izay mameno ny Spa dobo toy izany mivoaka avy ny lohataona indray mampiaraka ny an'arivony taona. Maninona raha manandrana izany manokana ho anao?
5 Best Hot Springs In Eoropa 3: Aqua Dome - Tyrol, Aotrisy
Nanomboka tamin'ny taonjato faha-16, ny olona no nitsidika Tyrol handray soa avy amin'ny fanasitranana fananan 'ny loharano mafana. Ankehitriny ianao dia afaka mahazo goavana dobo fandroana sy mafana feno 90 ambaratonga F 97 ambaratonga F mafana mafana ny rano. Inona no mahatonga izany dia ny lohataona miavaka levitating rano mafana vilia baolina, feno jiro, fanorana dabilio, ary whirlpools.
Ny maso misambotra ny maritrano ny niaviany Spa efitrano fitaratra ny hakanton'ny natiora ao amin'ny manodidina. Wood, vato, hazavana sy – mazava ho azy – ny rano no anisan'ny mahafinaritra toerana tsara tarehy. Miisa 12 anaty sy ivelan'ny trano dobo Manasa anao milomano ary aoka ny tenanao ho voatarika hiala. Ny anaty dobo dia mifandray amin'ny telo manaitra ivelan'ny trano dobo amin'ny stilts amin'ny ranomamy.
Hot Springs Ao Eoropa izay miala voly ary manan-tantara? Izany dia toa mitovy tsara ny fomba ny mifidy ny sasany bucket list zavatra iray mandeha. Ao am-pon'ny an-tanànan'i Bath, ho hitanao ny Thermae Spa Bath. Ny loka tamin'ny fifaninanana tamin'ny voajanahary spa izay afaka ankehitriny handro tao grande-Bretagne ihany mazava ho mafana, mineraly manan-karena rano. Toy ny Selta sy ny Romana no over 2,000 taona maro lasa izay. izany, na izany aza, mbola ho an-trano any grande-Bretagne ihany voajanahary rano mafana. Raiso ny tena fialan-tsasatra traikefa. Mitsidika ity loka tamin'ny fifaninanana tamin'ny andro spas mineraly manan-karena rano faly amin'ny 92 ambaratonga F sy tsara natao spa fitsaboana.
5 Best Hot Springs In Eoropa 5: Gellert Baths, Hongria
Efa namonjy ny tsara indrindra ho farany ao amin'ny boky. Raha te-hahatsapa toy ny fianakavian'ny mpanjaka, mihitsy aza fa ora vitsy monja, tena tokony hitsidika Gellert Fandroana ao Hongria renivohitra, Budapest. Ao ny nitarina rafitra ianareo dia hahita ny lehibe mafana fandroana andalana amin'ny romana andry. Ireo rano ireo dia misy singa samihafa izay mahasoa amin'ny fanasitranana vanin-taolana sy ny olana orthopedic hafa. Gellert Bath nisokatra in 1918 fanatitra fanafody fitsaboana mampiasa ny rano lalina toy izany koa ny loharano ambanin'ny tany Knights ny St John ampiasaina ao amin'ny taonjato faha-12, ary tatỳ aoriana tamin'ny Tiorka dia mamelombelon 'aina mahatsapa ny herin' ny manan-karena ny harena ankibon'ny rano.
Vonona hiaina amin'ny fialam-boly ny tena tsy manam-paharoa? Avy eo lohany ihany ho any Save A Train ny fiaran-dalamby sy ny Bokin'i tapakila na dia iray ihany ny pick ny 5 Loharano mafana tsara indrindra any Eoropa.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Best Voajanahary Loharano Mafana Any Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-hot-springs-europe%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, ary afaka manova ny /izany ny /tr na /de sy fiteny maro.